 » Momba ANAY » Media Coverage
Tamin'ny Jolay 21, tonga tao amin'ny Shaanxi Zhongbei Titanium Tantalum Niobium Metal Materials Co..
Ny vokatra vita vita amin'ny volafotsy amin'ny famirapiratanana metaly, ny sasany dia fantsom-boribory, ny sasany dia sombina mahitsizoro. “Ity no akora ampiasaina amin'ny fampisehoana finday Apple?”Manoloana ireo fanontanian'ny mpanao gazety, Andriamatoa. Qi Baoming, ny olona miandraikitra ny orinasa, nampahafantatra fa ny vokatra vita vokariny dia voahodina avy amin'ny metaly tsy ferrous sy metaly tsy fahita firy ho lasibatra firakotra, izay ny akora ilaina amin'ny fisalobonana lamba. “Aorian'ny fanomezana ny akora dia omena ny mpanamboatra hafa, manaparitaka ny akora amin'ny alàlan'ny fitaovana izy ireo, nafafy fanamiana ambonin'ilay vera mba hamoronana firakotra, miaraka amin'ity sosona fisaronana ity, ny vera dia afaka mampiseho ny sary.”Andriamatoa. Qi Baoming nilaza.
Tsy mora ny manamboatra fonosana akora mahazatra, voalohany indrindra, ny tahan'ny metaly dia mety, gasification mba hamorona potika vy tsara sy mitovy. Faharoa, hampifangaro tanteraka ny metaly maro, ny mari-pana koa tena manakiana, mafana loatra ary mangatsiaka loatra tsy mety, fanovana ratsy kely hanova fanjakana, misy fiantraikany amin'ny vokatry ny vokatra vita. Ankoatry ny, ny fampiharana amin'ny fampirantiana sy ny fitaratra fiara, vokatra fandroana, ny filàna karazana vy isan-karazany, ny tahan'ny, hafanana sy teknolojia koa tsy mitovy. Izany no antony, ny orinasa dia tsy nandany fotoana betsaka tamin'ny andrana fikarohana sy fampandrosoana, indrindra hanomezana akora ilaina amin'ny fampisehoana finday Apple, henjana kokoa ny fepetra takiana, matetika izy ireo dia miasa tsy tapaka mandritra ny fotoana maharitra hanaovana andrana, na ny fialantsasatra aza tsy miala sasatra, ny fandaniam-poana ny fitaovana mihoatra ny 100,000 yuan.
Andriamatoa. Qi Baoming dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa ny orinasa dia niova tsikelikely ho orinasa avo lenta hatramin'ny nananganana azy tao 2017, mamokatra lasibatry ny tantalum mihosotra sy mikitroka amin'ny tantalum, taharo niobium, zirconium, hafnium, vanadium, nikela, titanium sy metaly marobe, ary ny vokatra dia ampiasaina amin'ny indostria toy ny efijery fampiratiana, fakan-tsary, fanadiovana, fitaovana seramika, vera lehibe, faritra moto sy jiro elektrika. “Mba hanatsarana ny herinay, manohy manao fikarohana sy fampandrosoana ihany koa izahay, ary hatramin'ny niorenan'ny orinasa, manana teknolojia patanty modely miisa fito izahay.” Nampiditra Qi Baoming, “tanjona madio Rotary niobium fihodinana” ny haitao misy patanty dia iray amin'ireo teknolojia manan-danja indrindra amin'izy ireo, ny fizotran'ny andrana amin'ny fikarohana sy fampandrosoana mandritry ny efa-taona. Hain'ilay mpanao gazety fa io teknolojia io dia ampiasaina amin'ny firakotra vera lehibe, araka ny teknolojia teo aloha, ny coating dia tena mora mamokatra sombin-vy lehibe kokoa, hanao ny lavaka fitaratra, ka hofongorana ny vokatra rehetra. Aorian'ny fampiharana ity teknolojia ity, ny sputtering dia mitovy fanamiana kokoa ary ny tahan'ny vokatra vita dia ampitomboin'ny 20%.
Shaanxi Zhongbei Titanium-Tantalum-Niobium Metal Materials Co., Ltd.. miankina amin'ny haitao ifotony sy ny foto-kevitry ny fitantanana marina, miaraka amin'ny baiko vokatra tsy tapaka sy ny hevitra tsara avy amin'ny mpampiasa. Voalaza fa amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity, nahazo orinasa maherin'ny zato ny orinasa ary nahatratra mihoatra ny 18 TAPITRISA.